Appendages चोट: लक्षण र उपचार
आधुनिक संसारमा महिला प्रजनन अङ्गहरू को सुनिंनु को उचित सेक्स को धेरै असर, र यो मामला मा, धेरै साझा रोग मानिन्छ छ को appendages को सुनिंनु को गर्भाशय (ovaries र fallopian ट्यूब) को। यो रोग कारण केटी चिसो chilled खुट्टा कुरा वा बसे भन्ने तथ्यलाई मात्र छैन उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, hypothermia यो रोग को मुख्य कारण मानिन्छ, तर भडकाऊ प्रक्रिया र अन्य कारक योगदान छ। किन दुख appendages बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। लक्षण यो रोग को उपचार पनि छलफल गरिनेछ।
को भडकाऊ प्रक्रिया कारणहरू
को uterine appendages को सुनिंनु दुवै pathogenic र conditionally pathogenic सूक्ष्मजीवहरु प्रकुपित। केही कारक तिनीहरूलाई pathogenic बनाउन र लक्षण को उद्भव योगदान। संक्रमण को appendages निम्न प्रवेश:
योनी र cervix देखि;
को लसीका र रक्त नली मार्फत;
को sigmoid पेट, appendix - जहाँ भडकाऊ प्रक्रिया हुन्छ अन्य अङ्गहरू देखि।
किन दुख appendages? यो किनभने निम्न कारक कारण सुनिंनु को हुन्छ:
धेरै यौन साझेदार;
कमजोर प्रतिरक्षा विभिन्न संक्रमण र रोगहरु कारण - एचआईभी संक्रमण, मधुमेह, र अरूलाई;
यस्तो गर्भपतन रूप मा, uterine गुहा मा चिकित्सा manipulations।
दुखेको भने appendages, लक्षण यो रोग को स्थानीय र सामान्य हुन सक्छ। को fallopian ट्यूब र ovaries को हार आफ्नो सामान्य कामकाज disrupts।
फलस्वरूप, शरीर सुनिंनु प्रतिक्रिया निम्नानुसार:
दुखाइ। महिला को पेट मा दुखाइ अनुभव हुन सक्छ, र तिनीहरूले शक्ति विभिन्न तीव्रतासँग मा आउनुहोस्। अक्सर, दुखाइ aching छ, तर बिस्तारै बढ्दै। म iliac क्षेत्रमा यो महसुस र sacrum वा हिप मा यो क्षेत्र बाट बित्दै। मा पुरानो सुनिंनु appendages दुखाइ सहवास, मासिक धर्म वा exertion समयमा वृद्धि, स्थिर, तर पनि तीव्र छ।
को menstrual चक्रको विकार। appendages किनभने भडकाऊ प्रक्रिया चोट गर्दा महिनावारी अनियमित हुन र भारी रक्तस्राव संग एकदम दर्दनाक र लामो पाइन्छन्, हुन सक्छ। कहिलेकाहीं यो अन्य तरिका वरिपरि हुन्छ: को menstrual चक्र छोटो छ, र छुट्टी अभाव हुन्छ।
योनी छुट्टी। तिनीहरूले purulent, serous वा श्लेम लाग्एको झिल्ली, को लैंगिक अङ्गहरूको जलन र खुजली सँगसँगै छन्।
को भडकाऊ प्रक्रिया appendages जस्तै सामान्य लक्षण सँगसँगै छ:
वृद्धि शरीर तापमान। यसरी त्यहाँ एक ज्वरो, त्यहाँ टाउको दुखाइ र मांसपेशी दुखाइ हो शरीर तापमान 39 डिग्री को चिन्ह नाघ्यो छ।
फ्रेंच। महिला उल्टी खोल्न सकिन्छ, उल्टी सुरू हुन्छ, मुख dries।
को जठरांत्रिय पर्चा उल्लङ्घन। त्यहाँ पखाला को रूप मा विकार छ, पेट दुखाइ र सुनिंनु अवलोकन छ।
को मूत्र प्रणालीको अवरोध। जब सुनिंनु को फलस्वरूप चोट appendages, यो urination समयमा दुखाइ प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ, मूत्र सानो परिमाणमा जारी छ। कहिलेकाहीं त्यहाँ pyelonephritis र cystitis।
को endocrine र स्नायु प्रणाली को विकार। महिला neurosis र निराशा देखिन्छ, यसको दक्षता एकदम कम छ। धेरै विरामीहरु यौन इच्छा वा यसको अभाव कम गर्न चिकित्सकको को गुनासो।
appendages अक्सर किनभने सुनिंनु को चोट देखि त्यसपछि पछि अनुपचारित रोग बाँझोपन हुन सक्छ, यो fallopian ट्यूब वा adhesions को रोडा को गठन गर्न योगदान छ। साथै, appendages को हस्तान्तरण सुनिंनु अस्थानिक गर्भावस्था 5-10 पटक को जोखिम बढ्छ।
सर्जरी आवश्यक suppurative जटिलताहरू को उपस्थिति मा भविष्यमा परिणाम मा बालिका को स्वास्थ्य गर्न Flippant मनोवृत्ति। गंभीर अवस्थामा, हटाउने ट्यूब fallopian सक्छ।
रोग को उपचार
दुखेको appendages भने, उपचार एक समय तरिका सुरु गर्नुपर्छ। सामान्यतया, रोगी जहाँ उनले पहिलो नुन, कार्बोहाइड्रेट र मरिच प्रयोग समावेश एक आहार निर्धारित अस्पताल, पठाइएको छ। जब पहिलो केही दिनमा गंभीर दुखाइ विरामीहरु ओछ्यानमा हुनुपर्छ। दुखाइ र सुनिंनु डाक्टर पनि तल्लो पेट चिसो संकुचन मा राख्न सल्लाह गर्न सक्छन् त राम्रो, चिसो relieves छ।
औषधि उपचार appendages सुनिंनु एन्टिबायोटिक साथ सुरु हुन्छ। रोग सूक्ष्मजीवहरु विभिन्न समूहका कार्य कारण हुन्छ भएकोले यो सामान्यतया लागूऔषधको धेरै प्रकार प्रबन्ध छ।
तसर्थ, उपचार बाहिर छ जीवाणुरोधी एजेन्ट निम्न:
penicillins ( "Amoksiklav");
macrolides ( "इरिथ्रोमाइसिन");
cephalosporins ( "ceftriaxone");
nitromidazola डेरिवेटिव ( "metronidazole");
antifungal एजेन्ट ( "Diflucan", "Nystatin")।
आफ्नो डाक्टर अन्य एन्टिबायोटिक र स्वागत गर्ने सल्लाह दिन्छन् सक्छ, तर तिनीहरूले सामान्यतया एक अक्सिजन वातावरण बसोबास जो वनस्पति, सकारात्मक प्रभाव पार्न गर्नुपर्छ। एंटीबायोटिक प्रशासन को पहिलो तीन दिन जो पछि रोगी चक्की लिएर शुरू इंजेक्शन, मार्फत बाहिर छ मा, औषधिको खुराक र खुराक कम छ। यो थाले पछि उपचार को प्रभाव पहिलो दिन हुन्छ। तर एन्टिबायोटिक उचित परिणाम ल्याउन छैन भने, यो सम्भव सर्जरी छ।
यी तयारी साथै मा-रोगी उपचार नुनखरा समाधान, ग्लूकोज gemodeza र अन्य लागूपदार्थको नसों infusions शुरू द्वारा गरिन्छ। दुखाइ रोक्न र सुनिंनु कम गर्न, रोगी ट्याब्लेटको को रूप मा गैर-steroidal विरोधी भडकाऊ दबाइहरु लिन सिफारिस गरिएको छ। यी "ibuprofen", "diclofenac", "Ketarol" र अन्य साधन समावेश गर्नुहोस्।
रूपमा चाँडै सुनिंनु तीव्र फारम, जस्तै निर्धारित प्रक्रिया subsides रूपमा electrophoresis Lydasum वा आयोडिन, आवेगशील उच्च आवृत्ति धाराहरु, अल्ट्रासाउंड।
यसरी, विभिन्न कारण appendages चोट, तर सामान्यतया hypothermia सुनिंनु provokes। यदि यस्तो लक्षण पाइन्छन्, जस्तै पेट मा वाकवाकी, दुखाइ, शंकास्पद अलग रूपमा, तपाईं बन्द स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक यात्रा राख्नु हुँदैन। तपाईं उपचार ढिलाइ भने, तपाईं गम्भीर जटिलताहरू विकास हुन सक्छ।
भ्रूण को वैक्यूम निकासी: सङ्केत गर्छ, परिणाम
Gynecology मा एक goiter के हो?
एक गर्भपतन पछि एन्टिबायोटिक के पिउन? गाइड र समीक्षा
को गुलाब कसरी पुनर्जीवित गर्न? को wilted गुलाब कसरी पुनर्जीवित गर्न?
ब्याक्टेरिया क्लोस्ट्रिडियम भिजिलाइल
रूसी मिलाइएको कार किया
Oxymoron, साहित्य को उदाहरण। अभिव्यक्ति अर्थ
Moonshine को दबाव कुकर कसरी बनाउने
Maikop राज्य प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MSTU)
सूटकेस Heys: अवलोकन, मोडेल, निर्माता, र समीक्षा
संगठन र पूरा: Crimea मा एक विवाह भ्रमण